Iincwadi zesisa ezi-4 ngababhali abohlukeneyo. Isipho sobumbano. | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Iincwadi
Iincwadi ezimbalwa zobumbano
Yimihla efanelekileyo yokunika Iincwadi zesisa. Namhlanje ndibonisa ezi. Bazi Ababhali abaziwayo abaliqela, kodwa bazimisele kwaye bayasixhasa. Ke ndicinga ukuba kufanelekile ukuba bafumane ithuba kwibhlog enje. Zonke ezine zinegalelo kwizizathu ezahlukeneyo Leukemia yobuntwana, i Isifo seMarfan y izifo ezinqabileyo kukwangumntwana. Zintathu kubonisiwe kwaye enye isuka ukufota kunye noncwadi.
Banokufunyanwa kumnatha ngoku-odola kwimibutho eyahlukeneyo ebasasazayo. Inokuthengwa ngokuthe ngqo kwiAmazon. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba babenjalo kuyilelwe, kubhalwe kwaza kwaboniswa ziingcali ezilungileyo kakhulu ngako konke ukuzinikela kunye nothando. Ukongeza, badlala iintlobo ezahlukeneyo. Makhe ndikubalisele ngazo.
1 UKUHAMBA KWIPHEPHA
2 Iphondo likaMtyholi
3 IZIKHUMBUZO ZEKAMVA
4 UNCULO OLUNEMBALI
Ukuhamba kwiphepha (2013) yincwadi yesisa enemali eya ngokupheleleyo kwi silwe neleukemia yobuntwana ngeSiseko seAladina. Ukukhuthazwa nguBuzalwana boBomi (iGijon), yayisisiphumo se Intsebenziswano yababhali abalishumi elinesine kunye nemifanekiso elishumi elinesine phantsi kwegama likaEscribiendo e Ilustrando Por La Vida.
Yenzelwe abaphulaphuli umntwana nolutsha, Amabali alishumi elinesine ajongana nemixholo eyahlukeneyo enendawo ephambili yolonwabo kunye nefantasy. Izihloko zazo zezi: Yayibusuku bobusuku baseMidsummer, iMbali kaMadrigal, Ingoma yeQhawe elilibalekileyo, iBlackbird, Imfihlakalo yoGcino olulahlekileyo, uElías Negro, uhambo lukaKaled, uhambo oluyimfihlo lukaJulia, iNdlu eMangcwabeni, iiAdventures zikaPenelope Blue, ukuloba iincakuba, Parhelio y AbakwaKnickers.
Kwakusele kuqala ukurhatyela xa ndibona isikhephe ababeye kuso. Babephumelele. Banyuka bobathathu emseleni. Ngephanyazo amazwi abaphangi beva ukuba ngubani, ngokukhanya kokuqala kokusa, osifumene.
Ukusukela ngo-2013, ibhaliwe ngu UJesús Rodríguez, umbhali weAsturian, Esinye isihloko sobumbano kwaye ikwanyusa eyangaphambili. Le ncwadi inamaphepha ali-100 nje yile I-adventure yenqanawa yesiqhelo, ukuzingelwa kobutyebi, iipirate, abaphathi beenqanawa abanesibindi kunye namagorha aselula. Imnandi kakhulu kwaye ifundeka lulaIkwabandakanya uluhlu lweenkcazo zamabali amakhwenkwe.
Zombini zinokuthengwa ngokomyalelo kwiwebhu Ukubhala kunye nokuBonisa ngoBomi.
Iincwadi ezininzi zesisa
Iinkumbulo zekamva (2015). Ukusuka Umzekeliso, Iprojekthi edibanise ababhali abali-12 kunye nabazobi abali-12 benenjongo enye:
Isindululo: bhala a inoveli ebonisiweyo. Isini intsomi yesayensi kwaye yenziwa ngababini bombhali / wemifanekiso kwisahluko ngasinye. Ke, isahluko ngasinye sinxulunyaniswa nesilandelayo ngumbhali owahlukileyo kunye nomnye umzobi. Iziphumo: a ibali elinzima nelinomdla kwikamva, enemifanekiso eli-18, eya konwaba bonke abathandi bohlobo.
ISYNOPSIS: Unyaka 2041. Ihlabathi liye laba yindawo elawulwa yi-teknoloji kwaye ihlelwe kwizixeko ezibizwa iinyosi. un isifo esingaqhelekanga iqala ukucima iinkumbulo zabantu abaninzi nangakumbi. Amandla ezopolitiko aphethwe yiNkampani, iziko elixhotyiswe ngezakhiwo zokufunda nokunyanga esi sifo. Kodwa akukho nto kwaye akukho mntu ubonakalayo. Yintoni abafana ngayo bonke abo bachaphazelekayo sisifo? Yintoni i Iprojekthi yeNemesis? Umbuzo ophambili:umhlaba usengozini?
Iyafumaneka ephepheni (kwimfuno) nakwifomathi yedijithali.
Incwadi yeSolidarity yavela kwi umbono wezithombe URafael Plaza Aragonés ukwenza umboniso weefoto kunye noncwadi. Wacebisa ukuba Umbutho weSmiles, ongathandabuziyo ukusebenzisana. Imibutho emininzi yomanyano oluthathe inxaxheba, efana Abathunywa boxolo. Intshayelelo yencwadi isuka UBawo Angel. Imibutho yezokhuseleko kaRhulumente kunye nemikhosi nayo ijoyinile, njenge UMkhosi woLuntu kunye namaPolisa.
yakhe Iifoto ezingama-30 zabantwana abanezifo ezinqabileyo ezahlukeneyo. Bakhuthaza abaninzi amabali amafutshane kunye namabali amancinci de Ababhali baseSpain nabaseLatin America.
Ingathengwa ngoku-odola kwiphepha le- Umbutho weSmiles.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Iincwadi zesisa ezi-4 ngababhali abohlukeneyo. Isipho sobumbano.
UPABLO PASCUAL sitsho
Ndijoyina incwadi yam ethi DIARIOS DE LA REINA DEL OCÉANO kuluhlu lwababhali abanikela ngemisebenzi yabo kwizizathu zokunceda. Kwimeko yam, inzuzo evela kwintengiso yencwadi iya kuya kwi-CEAR (iKomiti yaseSpain yoNcedo lwaBabaleki).
Phendula PABLO PASCUAL
Iincwadana ezi-6 zolwimi lwaseSpanish. Iincwadi zemfundo nazo ukunika.